Ogaden News Agency (ONA) – 50,000 oo banaanbaxyo isugu soo baxay Waqooyiga Ethiopia
50,000 oo banaanbaxyo isugu soo baxay Waqooyiga Ethiopia
Posted by Dayr	/ July 15, 2013
Waxaa maalmihi lasoo dhaafay socday mudaharaadyo xoogan oo ka dhacayay caasimada magaalada Adis Ababa. Kuwo lamid ah mudaharaadyadan ayaa mucaarakda Itoobiya waxay ku qabteen gobolada Axmaarada iyada oo 50,000 dad kor u daafaya ay isugu soo baxeen banaanbaxyo aad u xoog badan oo looga soo horjeedo gumeysiga tabarta daran ee Woyanaha.
Ciidamada Gumeysiga Ethiopia ayaa isku dayay inay sirdoon badan ku daadiyaan deegamada Axmarada Sida Walo iyo Gondar si ay u fashiliyaan Banaanbaxayada ka socdoa Waqooyiga Itoobiya. Si kasta ha ahaate markii u horeysay waxaa dadkii waqooyiga Itoobiya ku dhiiradeen inaysan cabsanin isuna soo baxaan banaanbaxyo xoogan oo lagu duminayo gumeystaha Woyanaha.
Dadka ayaa ku dhawaaqaya ereyo ka dhan ah jiritaanka gumeysiga Woyanaha. Hoos ka daawo banaanbax kamid ah banaanbaxyada ka dhacay deegamada Waqooyiga Itoobiya gaar ahaan magalada Dhese banaanbaxan oo dhacay Axadi.